नेकपाको ‘शक्ति प्रदर्शन’: केपी ओलीको चर्को आलोचना, कसले के भने ?
नेकपाको ‘शक्ति प्रदर्शन’: ओलीको चर्को आलोचना, कसले के भने ?
१४ पुष २०७७, मंगलवार १७:२९
काठमाडौं — सरकारले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले आज काठमाडौं उपत्यकामा देशभर प्रदर्शन गरेको छ । नेकपाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर मंगबार सरकारको पछिल्लो कमदविरुद्ध शक्ति प्रर्दशन गरेको हो ।
राजधानी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट जुलुस सहितको प्रर्दशन र भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको प्रदर्शनमा शहीदढोका, वीर अस्पताल, रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक हुँदै भृकुटीमण्डपमा आई सभामा परिणत भएको थियो । प्रर्दशनमा पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत शीर्ष नेताको सहभागिता रहेको थियो । नेकपाले संसद् विघटनविरुद्ध जनप्रदर्शन गर्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई हजार ५०१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको थियो ।
यो समूहको जुलुस टेकु, कुलेश्वर, कुपण्डोल, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, न्यूरोड, नक्शाल, रत्नपार्क, त्रिचन्द्र कलेज, बागबजार, वाल्मिकी क्याम्पस, लगायतका स्थानबाट निस्किएको हो । टेकुबाट युवराज ज्ञवाली, कुलेश्वरबाट बेदुराम भुसाल, कुपण्डोलबाट पम्फा भुसाल, नयाँ बानेश्वरबाट लिलामणि पोखरेल, मैतीदेवीबाट हरिबोल गजुरेल, नक्सालबाट जनार्दन शर्मा, न्यूरोडबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, रत्नपार्कबाट मुकुन्द न्यौपाने, त्रिचन्द्रबाट योगेश भट्टराई, पुरानो बानेश्वरबाट अमृत बोहोरा, बागबजारबाट गिरिराजमणि पोखरेल, वाल्मिकीबाट गणेश साहले जुलुशको नेतृत्व गरेका नेकपाले जनाएको छ ।
सभालाई नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । यही पुस ७ देखि ९ गतेसम्म बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुस १४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदर्शनका लागि पार्टीका शीर्ष नेता देशभर खटिएका छन् । नेकपाले संसद् विघटनविरुद्ध जनप्रदर्शन गर्न प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई हजार ५०१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेको थियो ।
जनतासँग प्रचण्डले मागे माफी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केपी शर्मा ओलीले ईतिहामा कहिल्यै नमेटिने गरी कलंकको टीका लगाएको बताएका छन् ।
नेकपाद्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका क्रममा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैले बनाएको संविधानको ओलीले बलात्कार गरेको बताए ।
उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको छैन । भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो ।’ उनले भने, ‘केपी ओलीले इतिहासमा कलंकको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन । आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ भनेर उनले आफैले नभनेसम्म इतिहासले र नेपाली जनताले माफी दिने छैनन् ।’
प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई बुझ्न नसकेको भन्दै जनतासँग माफीसमेत मागेका छन् । आफूहरुले नै बनाएको प्रधानमन्त्रीले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्‍यो भन्नुपर्दा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो लागेको लागेको भन्दै प्रचण्डले जनतासँग माफी मागेका हुन् ।
‘ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनमा पक्षमा छैनन् भन्ने पनि थाहा थियो, बयलगाढाको सिद्धान्त पनि थाहा थियो’, प्रचण्डले भने, ‘उहाँले जनताको आन्दोलनको आँधी आयो, हुरी आयो, मैले पनि मानिदिएँ भन्नुभयो । हामीले सच्चिनुभयो होला भन्ने मान्यौं ।’ तर ओली त अझै बयलगाढामै रहेछन् भन्दै प्रचण्डले भने, ‘केपी ओलीलाई बुझ्न सकिएन, यसमा जनतासँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु ।’ ओली निरंकुश तानाशाह रहेको र उनले देशलाई भड्खालो हाल्न चाहेको प्रचण्डको आरोप छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिएपछि राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युग प्रारम्भ हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा रहेको उनले स्मरण गराए । उनले नेपाली जनताको अगाडि उभिएर आफूहरुले नै बनाएको, आफ्नै पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट त्यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएको प्रचण्डको भनाई छ । प्रचण्डले नेपाली जनतामा जागरण र चेतनाको नयाँ युग प्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै ‘प्रतिगमनकारी’लाई खबरदारीसमेत गरेका छन् ।
प्रचण्डले वैशाखपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नरहनेसमेत दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘कतिपय मानिसहरुलाई कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको, मध्यावधि भइहाल्यो भने हामीले चुनाव जितिन्छ भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको सुनिन्छ’ । प्रचण्डले भने, ‘त्यो दुश्वस्न हो भन्ठान्छु । हुनेबाला चुनाव घोषणा भएकै होइन ।’
छँदोखाँदोको बहुमत छोडेर दुर्घटना गराउनेले चुनाव गराउँछन् भन्ने ठान्नु गल्ती हुने प्रचण्डको भनाई छ । प्रचण्ड भने, ‘मलाई लाग्छ, केपी ओली गोटी भएका हुन् । वैशाखपछि उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैनन्, नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्तासाथ हुनेबाला छ । अनि उनीले नै श्री ३ महाराजधिराज हुन्छु भनेर हुन्छ ।’
प्रचण्डले संसद विघटनविरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्नु परेपनि तयार रहेको बताए । प्रचण्डले भने, ‘भोलि नै अर्को चरणको कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौं । यो भन्दा अलि कडा । प्रधानमन्त्री वा अरु भ्रममा नबस्नुहोला । सिधासिधा कुरा हो, हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौं ।’ विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तपाईहरुले कति गर्न सक्ने हो, तयारी गरे हुन्छ । हामी छाड्ने बाला छैनौं ।’
ओली प्रवृत्तिको आयु सकियोः माधव नेपाल
यस्तै, नेकपा (प्रचण्ड–माधव पक्ष)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली जनता अब दास बन्न तयार नरहेको बताए । राजधानीमा संसद विघटनविरुद्ध काठमाडौंमा भएको विशाल प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भने ‘नेपाली जनता दास बन्न तयार छैनन् । उनीहरु अव देशलाई सहि लिगमा लिएर जान र समाजवादको दिशामा जाने पक्षमा रहेका छन् । त्यो काम गर्ने शक्ति भनेको हाम्रो पार्टी नेकपानै हो,’ ।
उनले राजा ज्ञानेन्द्र प्रवृतिसँग तुलना गर्दै नेता नेपालले ओलीलाई अझै सद्बुद्धि आवस् भन्ने कामना गरेको बताए । नेता नेपालले निरंकुश बाटो समातेका केपी ओली र उनको प्रवृत्तिको आयु सकिएकोसमेत बताएका छन् । केपी ओली र ओली प्रवृत्तिको आयु सकिएको बताएका हुन् ।
ओलीले पार्टीलाई भर्‍याङ मात्रै बनाएः खनाल
यस्तै, (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई भर्‍याङ मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन् । संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड–माधव समूहले राजधानीमा गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले बालुवाटार पुगेकै दिनदेखि केपी शर्मा ओलीले पार्टी बिर्सिएको बताए ।
ओलीको चर्को चर्को आलोचना खनालले भने, ‘पार्टीका नीति बिर्सनुभयो, एकलौटी ढंगले मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो, नीति कार्यक्रम ल्याउनुभयो ।’ ‘कहिले पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, कहिले घरघरमा पाइपबाट ग्यास ल्याउने कुरा गर्नुभयो । खोइ पानी जहाज रु खोइ घरघरमा ग्यास पाइप ?’ उनले अघि भने ।
काम गर्न नसकेको भनेर आफूहरुले प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्व चकित हुने काम गरेको दाबी गरेको सुनाए । ओलीले सडक र पुललाई समाजवाद देखेको र पछिल्लो समय त मैले रानी पोखरी बनाएँ भन्न थालेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मरिचमान श्रेष्ठ र नगेन्द्रप्रसाद रिजालले जत्ति पनि काम गर्न नसकेको खनालको आरोप लगाए ।
ओलीको प्रतिगामी नसच्चिएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
यस्तै, नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्षका नेता तथा संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति र जनता ऐक्यवद्ध हुन जरुरी रहेको पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद भङ्ग गर्ने कदमविरुद्ध काठमाडौँमा भएको शक्ति प्रदर्शनका क्रममा भृकुटीमण्डपमा भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता श्रेष्ठले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको रक्षा गर्न नेपाली जनता तयार छन् भन्ने कुरा विरोध प्रदर्शनमा सहभागी जनताको सहभागिताबाटै पुष्टि भएको पनि बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदम नसच्चिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद भंग गर्ने असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमका विरुद्ध प्रदर्शनमा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिए । त्यसक्रममा उनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुने भन्दै आन्दोलन भाँड्न हुने षड्यन्त्रप्रति सचेत रहन आग्रह गरे । नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहनेसमेत बताए । साथै उनले संबैधानिक निकायका सदस्यहरुले पनि असंवैधानिक कदमको विपक्षमा निर्णय गर्नेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको जनाए ।
ओलीले संघीयता र लोकतन्त्रमाथि धावा बोले, अव यो सत्ता धेरै टिक्दैनः अष्टलक्ष्मी शाक्य
यस्तै, (नेकपा) प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता वागमती प्रदेश संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र आएपछि, गर्व गरिरहेपनि प्रधानमनत्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेकाले आनदोलनमा जानु परेको बताइन् ।
भृकुटी मण्डमा मंगलबार भएको विरोध प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘संविधानमाथि कू भएको छ । ओलीको यो कदम निस्तेज बनाउन, संसद सुचारु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउन आन्दोलन गरेका हौ’ ।
नेतृ शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी ओली कमरेड केपी ओलीका रुपमा नरहेको बताईन् । केपी ओली निरंकुश र समान्ती शासक बनेको नेतृ शाक्यको भनाई छ । ‘केपी ओलीले जनतामाथि धावा बोल्ने र अधिकार खोस्ने काम गर्नुभयो, अब उहाँ कमरेड केपी अ‍ोली होइन, प्रतिगमनकारी ओली बन्नुभयो’ शाक्यले भनिन्, ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दृढताका साथ अघि बढ्छौ । जनताका शक्तिका अगाडि कस्ता कस्ता शासक त ढले भने स्वभाविक रुपमा ओली सरकार पनि ढल्ने छ । ओलीको शासन सत्ता टिक्दैन ।’
प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म सडक छाड्दैनौं : योगेश भट्टराई
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले जुन दिनसम्म प्रतिगमन सच्चिँदैन, संविधान सही ठाउँमा आउँदैन, प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिँदैन त्यो दिनसम्म सडक नछाड्ने बताएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध जनप्रदर्शनको उपत्यकामा भईरहेको सभालाई सञ्चालन गरिरहेका नेता भट्टराईले यो कार्यक्रम आफूहरु सडकमा आएको जानकारी दिन मात्र भएको बताए । उनले जनप्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै उनले भने, ‘जुन दिनसम्म प्रतिगमन सच्चिँदैन, संविधान सही ठाउँमा आउँदैन, प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरिँदैन, हामी सडक छाड्दैनौं ।’